Aquarium an-dranomasina | Ny trondro
Araka ny fantatsika rehetra fa misy izy ireo trondro rano mangatsiaka sy trondro rano mangatsiaka. Samy azo atao anaty aquarium izy roa. Noho izany dia mila fantarintsika ny zavatra rehetra ilaintsika mba hananana karazana aquarium tsirairay. Ao amin'ity habakabaka ity dia ho hitanao izay rehetra ilainao manana a aquarium an-dranomasina izay ahafahan'ny hazandrantsika miaina am-pilaminana sy amin'ny toe-javatra tsara indrindra.
soso-kevitra, antsipiriany sy hevitra ho an'ny biby hankafizany toeram-ponenana tena mitovy amin'ny voajanahary, Fantatsika fa tsy mitovy izy io fa raha tiantsika ny trondro dia fomba tsara hikolokoloana azy ireo izany, mitady vaovao momba an'io lohahevitra io sy ireo toetra tokony ho fantatsika mba hahafahan'ny trondro an-dranomasina miaina ao anaty ranomasina anaty ranomasina.
Tsy afaka manadino izany isika zavamananaina izy ireo ary tokony hikarakara azy ireo isika mba tsy hahafaty azy ireo amin'ny fikasana na amin'ny fikasana hitazona azy ireo ho babo.
Misy singa samihafa ilaina amin'ny fampandehanana tsara ny aquarium. Ny singa tsirairay dia samy manana ny asany ary mampiorina ny fepetra ...
Raha hanomboka amin'ny tontolon'ny aquarium dia tsy maintsy fantatsika fa misy trondro rano velona sy ...
Ny jiro aquarium tsara indrindra
Ny jiro ao anaty aquarium dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiainan'ny hazandranontsika. Mitady jiro miaraka ...
Mety manapa-kevitra ianao raha te hanana rano velona na aquarium ranomasina. Raha misafidy an'ity ianao ...
Trondro pensilihazo mena
Ny iray amin'ireo mampiavaka indrindra ny trondro pensilihazo mena dia ny fandokoany. Ary koa ny dian-kapoka maizina telo ...
Substrates ho an'ny Aquarium
Rehefa fampitaovana ny Aquarium dia aza hadino ireo substrates. Eo amin'ny tsena dia misy faritra maro ...
Trondro argos volafotsy
Ny trondro argos volafotsy dia safidy tsara ho an'ireo mpankafy rano velona izay maniry hanomboka hiditra amin'ny ...
Mullet miloko marevaka
Na dia tsy ny mullet aza no karazany mety indrindra hambolena ao anaty aquarium. Saingy, ny lokony mirehareha dia mahatonga ...
Jiro ilaina amin'ny aquarium
Ilaina ny jiro ao amin'ny aquarium mba hahatratrarana tontolo iainana ara-dranomasina mety. Ireo ekipa samihafa no miova ...
Trondro telo rambo
Ilay trondro telo rambo dia trondro kely, 20 santimetatra eo ho eo, miaraka amin'ny vatana somary tery sy ...
Ny trondro Serrano an'ny fianakavian'i Serranidae
Ny trondro serrano, ny anarany manokana dia serrano scriba, karazan'olona lava lava izy io, na dia be volo aza ...
Vieja del Agua, ity no iray amin'ireo trondro mahagaga indrindra
Trondro hareza, iray amin'ireo karazana hafahafa
Ny fiasan'ny sifotra ao anaty aquarium
Ny mackerel malaza
Izahay dia mijery ilay foza Yeti
Iray amin'ireo karazana malaza indrindra, ny Sole
Kulli ilay trondro
Fikarakarana sy toetran'ny trondro misy puffer
Trondro Bicolor Labeo